Ajụjụ: Otu okirikiri nke Testosterone ga-emerụ gị ahụ - BikeHike
Ajụjụ: Otu Cycle nke Testosterone ga-emerụ gị ahụ
Ogologo oge ole ka ọ na-ewe iji gbakee site na okirikiri testosterone?
Ogologo oge ole ka ọ na-ewe maka testosterone steroid ịgbaba?
Ogologo oge ole ka m ga-echere n'etiti okirikiri?
Masturbating ọ na-ebelata testosterone?
Kedu ihe na-eme mgbe m kwụsịrị ịṅụ testosterone?
TRT ọ na-ebelata ndụ gị?
Kedu mgbe kacha mma n'ụbọchị ịgbanye testosterone?
Kedu ihe steroid na-eme bodybuilders?
testosterone ọ bụ steroid?
Ojaculating ọ na-eme ka ike gwụ gị?
Kedu uru ọ dị n'ịghara ime onwe ya?
Gịnị bụ mmetụta nke ukwuu testosterone?
Mkpụrụ ọgwụ testosterone ọ dị njọ?
Ndị nwere testosterone dị elu na-adị ogologo ndụ?
Ọ dị mma ka nwoke were testosterone?
Afọ ole ka ị nwere ike ịnọ na TRT?
1 ml nke testosterone ọ dị ọtụtụ?
Ogologo oge ole ka ọ na-ewe maka ogbugba testosterone ịmalite ịrụ ọrụ?
Ị nwere ike ịṅụbiga mmanya ókè na testosterone?
Kedu ihe bụ steroid kasị dịrị nchebe maka ịmepụta ahụ ike?
Kedu ihe bụ steroid kacha ike?
Kedu ihe kacha mma steroid maka oke?
Ị nwere ike ịgbanye testosterone na bọọlụ gị?
Ndị na-akwalite testosterone ọ dị mma?
Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ndị ikom niile nwere nchịkọta testosterone na-alaghachi na nkịtị ọnwa atọ ka njedebe nke usoro ahụ gasịrị, na 100% site na ọnwa 12, na-enye ha ọrụ gonadal nkịtị na mmalite nke ọmụmụ.
Nsonaazụ. Mmetụta na mmasị mmekọahụ na-apụta mgbe izu 3 gachara n'izu isii, na-enweghị mmụba ọzọ a na-atụ anya karịa. Mgbanwe n'ime erection/mwepu nwere ike ịchọ ihe ruru ọnwa isii. Mmetụta na ogo ndụ na-apụta n'ime izu 6-6, mana uru kachasị na-ewe ogologo oge.
Oghere n'etiti okirikiri nke pụtara ichere ihe dịka izu anọ ruo isii ka ebufe embrayo gachara na ule ime ime adịghị mma ka ịmalite okirikiri ọzọ zuru oke maka ọtụtụ ụmụ nwanyị. Ime nke a ọtụtụ ugboro n'usoro ka a na-ezo aka dị ka inwe azụ azụ IVF cycles. Mgbe cycles na-aga n'ihu, enwere ike ịkpọ ha ka egbu oge.
Ọtụtụ ndị kwenyere na imetọ onwe onye na-emetụta ogo nwoke testosterone, mana nke a abụchaghị eziokwu. Masturbation adịghị ka ọ nwere mmetụta na-adịgide adịgide na ogo testosterone.
Ọ bụrụ na i jirila testosterone dị ukwuu, ịkwụsị ọgwụ ahụ nwere ike ịkpata mgbaàmà nkwụsị na-adịghị mma, dị ka ịda mbà n'obi, ike ọgwụgwụ, mgbakasị ahụ, enweghị agụụ, nsogbu ihi ụra, ma ọ bụ ibelata agụụ mmekọahụ.
A kọwapụtala okwu gbasara obi na akwara na TRT site na nyocha ndị na-adịbeghị anya na-egosi na ọgwụgwọ metụtara mmụba doro anya na ọkwa testosterone serum na oke nkịtị na-ejikọta ya na mbelata ihe niile na-akpata ọnwụ.
Omenala, ọ bụ ututu. Ọ bụghị na sayensị dị mkpa ịgbanye testosterone n'ụtụtụ, ọ bụ ezie na testosterone anyị nọ na ọkwa kachasị elu n'ụtụtụ.
Nke a bụ ndepụta nke ụfọdụ steroid anabolic a na-ahụkarị taa: anadrol, oxandrin, dianabol, winstrol, deca-durabolin, na equipoise.
Steroid anabolic Isi homonụ anabolic steroid nke ahụ gị mepụtara bụ testosterone. Testosterone nwere mmetụta abụọ dị mkpa n'ahụ gị: Mmetụta anabolic na-akwalite ụlọ anụ ahụ. Mmetụta Androgenic bụ maka àgwà nwoke, dị ka ntutu ihu na olu miri emi.
Masturbation ọ̀ na-akpata adịghị ike? Mba, igbo onwe onye anaghị ebute adịghị ike. A na-ewepụta hormone Prolactin n'oge mmetọ onwe ya na dịka ọmụmụ si kwuo, Prolactin nwere ike imetụta ụra, si otú a na-eme ka ike gwụ gị na iro ụra. Eziokwu na-atọ ụtọ, ọtụtụ ndị na-emetọ onwe ha ọbụna iji nyere ha aka ihi ụra ma belata nchekasị.
Ịhapụ ejaculating maka ụbọchị ole na ole nwere ike ịbawanye testosterone ma melite ogo spam. Agbanyeghị, ọ nweghị nyocha ọ bụla iji kwado nkwupụta ndị ọzọ metụtara ịghara ime onwe ya. Ọtụtụ ndị ọkachamara kwenyere na igbo onwe onye bụ akụkụ dị mma yana akụkụ dị mkpa nke mmepe mmekọahụ.
Ndị ikom nwere ọkwa testosterone dị elu nwere ike ịnweta: otutu. omume ike ike ma ọ bụ ime ihe egwu. oke ahu ntutu . isi ọwụwa. nsogbu obi ma ọ bụ imeju. ọbara mgbali elu (ọbara mgbali elu) oke agụụ mmekọahụ (libido) ụbara agụụ.
WEDNESDAY, Ọkt. 26, 2016 (HealthDay News) - Mgbakwunye testosterone na ndị metụtara anabolic-androgenic steroids (AAS) nwere ike ime ka nkụchi obi, mgbanwe mmadụ na enweghị ọmụmụ, na-emegbukwa ya ngwa ngwa, US Food and Drug Administration na-adọ aka ná ntị.
Ọ na-ekwu na ọkwa testosterone dị elu na-ejikọta ya na ogologo ndụ dị ogologo nakwa na ndị na-adị ogologo ndụ nwere ọkwa dị mma nke hormone ahụ.
Testosterone na-ahụ maka ịba ụba akwara. Nnukwu ahụ dị nro na-enyere aka ịchịkwa ibu ma na-abawanye ume. Maka ndị ikom nwere testosterone dị ala, ọmụmụ na-egosi na ọgwụgwọ nwere ike ibelata oke abụba ma mee ka ọkpụkpụ na ike dịkwuo elu.
N'ikwu okwu n'ozuzu, ọgwụgwọ testosterone bụ ọgwụgwọ na-aga n'ihu na-aga n'ihu ogologo oge, ma ọ bụrụ na ọ bụghị ruo mgbe ebighị ebi. Dị ka ọ dị n'ọtụtụ ọnọdụ na-adịghị ala ala, ịkwụsị ọgwụgwọ nwere ike ịhụ mgbaàmà gị na-alọghachi ka ọkwa testosterone ọzọ daa n'okpuru ọkwa ahụike.
1 ml kwa izu bụ 200 mg kwa izu nke testosterone. Nke a bụ dose nnọchi egosighi na ọ ga-abawanye oke dabere na obere oge. Otú ọ dị, iji doses dị elu nwekwara ike ịbawanye mmepụta mkpụrụ ndụ ọbara uhie na viscosity ọbara, ya mere dọkịta gị kwesịrị nyochaa ọkwa ọbara hematocrit gị.
Kedu mgbe ọgwụgwọ maka Testosterone dị ala ga-amalite ịrụ ọrụ? Maka ụmụ nwoke ndị e nyere ọgwụ nnọchi testosterone, ọ na-ewekarị ọnwa atọ ruo ọnwa isii ịrụ ọrụ, Farooq kwuru. Farooq kwuru, "Ụfọdụ ụmụ nwoke nwere ike ịhụ ọganihu n'oge na-adịghị anya, mana maka ọtụtụ ụmụ nwoke, ọ bụ usoro eji nwayọọ nwayọọ.
Kpọọ dọkịta gị maka ntụziaka ma ọ bụrụ na ị na-atụ uche oge maka ịgba ọgwụ testosterone gị. Ebe ọ bụ na onye ọkachamara ahụike nyere ọgwụ a na ọnọdụ ahụike, ọ gaghị ekwe omume ịdoụbiga mmanya ókè.
Testogen bụ n'ezie ihe na-akwalite testosterone, ọ nwekwara nchịkọta nke ihe ndị dị ike, na-eme ka ọ bụrụ ihe zuru oke, eke, na nchebe ọzọ maka steroid. Ezigbo steroid anabolic bụ naanị ụdị testosterone dị iche iche, yabụ na ọ bụ ihe ezi uche dị na ya na nkwalite testosterone ga-enyere gị aka iwulite ahụ ike.
Enwere ihe karịrị 100 ọdịiche nke steroid anabolic. Androgen kachasị ike bụ testosterone (akpọ: tess-TOSS-tuh-rone). Ọ bụ ezie na testosterone bụ hormone nke nwoke tozuru okè, ahụ ụmụ agbọghọ na-emepụta obere ego.
Trenbolone na Dianabol; Dianabol bụ steroid nke nhọrọ maka ndị na-achọ ịmepụta nnukwu ahụ ike n'ime obere oge. A na-ahụ steroid a maka ike ya, na ịgbakwunye ya na nchịkọta gị yana testosterone ga-eme ka ọkpụkpụ gị dịkwuo elu.
Mgbe a na-ede ya n'ụdị ude nwere ihe ndabere kwesịrị ekwesị, a pụrụ itinye testosterone transdermal na scrotum. Akpụkpọ anụ Scrotal dị gịrịgịrị ma nwee ikike steroid dị elu. Ọ dị oke mkpa ka ị zere iji ude ma ọ bụ gel nwere mmanya na-aba n'anya n'ihi na mmanya na-emerụ ahụ maka ahụ ike anụ ahụ.
Ihe mgbakwunye testosterone ọ dị mma? Ụfọdụ OTC testosterone boosters nwere ike ịdị mma mgbe ejiri ya mee ihe n'ókè, ma ha enweghị ike ịkwalite ma ọ bụ nọgide na-enwe ọkwa testosterone gị. Ụdị niile nke OTC testosterone boosters na-enye ihe ize ndụ ahụike pụrụ iche nke ha.
Ajụjụ: Ogologo oge ole Testosterone Cycle
Otu esi agbagharị Testosterone
Ajụjụ: Gịnị Lower Testosterone
Kedu ihe na-ebelata Testosterone
Usoro ndụ Beetle nke ọnwa Mee
Ajụjụ: Otu esi agbagharị Testosterone Boosters
Azịza ngwa ngwa: Ị nwere ike ịgbanyụ Testosterone
Ajụjụ: Kedu ka Testosterone si eme
Enwere igwe igwe
Azịza ngwa ngwa: Mee igwe kwụ otu ebe
Ajụjụ: Gịnị Nri Lower Testosterone
Azịza ngwa ngwa: Kedu nri na-ebelata Testosterone
Previous Post: Ajụjụ: Gịnị kpatara eji akpọ okirikiri nkume okirikiri
Next Post: Ajụjụ: Ọ ga-eme atụmatụ B mebie okirikiri gị